mairie-antananarivo – 8 Martsa 2018 – Boriboritany Voalohany
8 Martsa 2018 – Boriboritany Voalohany
Fitokanana ny « maison digitale pour les femmes »
Natambatra ny andron’ny 8 Martsa2018, andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, teny amin’ny Boriboritany Voalohany ny fitokanana tamin’ny fomba ofisialy ireo « maisons Digitales pour les femmes » izay miisa telo teto anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia ny teny amin’ny Boriboritany I, II ary ny VI. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany teny an-toerana ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany sy Faharoa ary Fahaenina izay nisolotena ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny Filohan’ny« Orange Solidarité Madagascar » ary ireo mpikambana avy ao amin’ny « Association » EZAKA.
Ankoatra ity fitokanana fotodrafitr’asa ity dia nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana informatika toy ny : « tablette, serveur Raspberry, imprimante, vidéo projecteur, clés USB ary ordinateurs portables », teo ihany koa ny fanomezana « certificat »ho an’ ireo vehivavy mpikambana 14 izay nahavita ny fiofanana hatramin’ny farany tao amin’ny « Maison Digitale pour les femmes » teny anivon’ny Boriboritany.
Araka ny nambaran’Andriamatoa RAHARIVELO Tiana Harilaza izay Delegen’ny Boriboritany Voalohany dia : « ity tetik’asa iray ity dia anisan’ny fanampiana ireo vehivavy marefo eny anivon’ny fiaraha-monina amin’ny fikirakirana ny teknolojia, ankoatra izay dia misy ihany koa ny fampiofanana azy ireo amin’ny famolavolana tetik’asa satria ny vehivavy no antoky ny fampandrosoana ny fiaraha-monina sy ny ankohonana ».
Tamin’ny taona 2015 no nisy ny « Maison Digitale pour les femmes » voalohany teto Antananarivo Renivohitra kany Boriboritany faha-4 no nisitraka izany voalohany. Ankehitriny kosa dia efa misy ny « Maison Digitale pour les femmes »manerana ireo Boriboritany 6 eto Antananarivo Renivohitra.